Choputa Széchenyi Spa na Budapest | Akụkọ Njem
El njem na Budapest jupụtara ebe mara mma na anyị kwesịrị ịhụ, mana taa, anyị ga-ekwu maka otu n'ime ebe ngosi ya kachasị mma, Széchenyi Spa, ebe e kere na mbido narị afọ nke XNUMX dịka ebe ntụrụndụ nke taa ka nwere ọmarịcha mma. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ njem na Budapest, ebe a kwesịrị ịbụ n'etiti ndị kacha gaa ileta.
El Széchenyi Spa bụ otu n’ime ndị kasị ibu na Europe na ọ bụkwa ebe a na-enweghị onye na-atụ uche na njem na Budapest. Obodo a na-enye anyị oke nketa yana ndị omeiwu ya, Buda Castle ma ọ bụ nnukwu ụlọ ụka Senti nke San Esteban. Na mgbakwunye, enwere spa ndị ọzọ dịka Gellert Spa ma ọ bụ Rudas, ọ bụ ezie na obi abụọ adịghị ya na ọ bụ nke a kacha mara amara niile. Ka anyị matakwuo banyere ebe ngosi a na Budapest.
1 Akụkọ banyere spa
2 Choputa Spa
3 N'aga n'ihu
4 Spas ndị ọzọ
Akụkọ banyere spa
Széchenyi Spa malitere dị ka oru ngo ama na narị afọ nke XNUMX, ọ bụ ezie na ọ ga-abụ ruo mmalite nke narị afọ nke XNUMX nke ahụ ga-ewere ọnọdụ. Emechara spa a na 1913 na-akpata nnukwu mmetụta n'ihi nha ya na ọnụ ọgụgụ nke ime ụlọ ịwụ ọ nwere. Taa, ọ ka bụ otu n'ime nnukwu spa na Europe niile. Ọ bụ ihe amaara ụwa dum na Budapest bụ obodo spa, wee nwee oke ama. O nwere baths iri na abụọ na ihe dị ka otu narị isi mmiri. Mmiri mmiri nke spa a na-esite n'olulu miri emi nke obodo ahụ, ihe karịrị mita 1.200 miri emi na ogo 76.
Spa a nwere akụrụngwa na n'ọnọdụ ụfọdụ dịtụ nke ochie, mana ha ka na-adọrọ adọrọ. Na tiketi enwere ohere ịbanye na ebe mkpuchi na ụlọ na-agbanwe agbanwe. Enwekwara ike ịzụta tiketi VIP na ime ụlọ nkeonwe. Na spa ụlọ ọrụ anyị ga-ahụ ruo 15 ọdọ mmiri, iri na abụọ n'ime ha n'ime ime ime obodo na mpaghara ịhịa aka na saunas. Nnukwu ọdọ mmiri ndị dị n’èzí na-ewu ewu n’ezie. Ezigbo ahụmịhe bụ ịga n'etiti oge oyi ma hapụ ya ka ọchịchịrị gbaa n'ime ha. Ọnọdụ okpomọkụ nke ọdọ mmiri ndị dị n'èzí dị ogo 37, yabụ na anyị ga-enwe ahụ iru ala n'afọ niile. Ha na-eju eju ebe niile mana ha buru oke ibu, yabụ anyị agaghị enwe mmetụta nke ịbụ ndị akarị akarị. Nke a bụ ebe a kacha mara amara na spa na ntụpọ zuru oke iji see foto. Gburugburu ọdọ mmiri ahụ nwekwara ụfọdụ ndị na-eji anwụ anwụ.
Nwere ike ịzụta ihe abanye na spa ma ọ bụ dobe ya n'ịntanetị n'ọdịnihu, ihe a na-atụ aro ya mgbe ọ dị elu. A pụrụ ịzụta tiketi a yana ịhịa aka n'ahụ. Ọ dị mkpa icheta iweta mpempe akwụkwọ, akwa mmiri na akwa nhicha, ọ bụ ezie na ọ bụrụ na anyị echefu, ha ga-enye anyị ihe ndị a ebe ahụ. Arefọdụ na-akwụ ụgwọ na ndị ọzọ anyị ga-azụ. Ha na ọnụ ụzọ ha na-enye anyị okpu mmiri mana eziokwu bụ na ọ fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na ọ dịghị onye na-eji ya. Banyere ọnụahịa ahụ, ọ na-adịkarị ihe dị ka euro iri abụọ, mana ọ nwere ike ịgbanwe dabere na ụbọchị na ọchịchọ, yabụ ọ ka mma iji ya tupu oge eruo. Tiketi a na-enye anyị ikike ịnọ ụbọchị niile na spa na iji ụlọ ọrụ ndị nkịtị. Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịhịa aka n'ahụ ma ọ bụ ọgwụgwọ spa, anyị ga-akwụ ụgwọ iche.
Spas ndị ọzọ
Budapest bụ obodo spa na ọzọ nke kacha mara amara bụ Gellert Spa. Emekwara spa a mara mma na mmalite nke narị afọ XNUMX. Spa a dị n'akụkụ ụlọ nkwari akụ nke nwere otu aha ahụ, ọ bụ ezie na ọdọ mmiri ahụ dị ebe ahụ tupu ụlọ nkwari akụ ahụ ma nwee ọnụ ụzọ nke ya. Enwere ike ileta ha, agbanyeghị na ekwesịrị ikwu na isi ọdọ mmiri, nke bụ ihe kachasị mma o nwere, enweghị mmiri ọkụ, yabụ na ọ naghị atọ ụtọ n'oge oyi. Ihe ndi ozo di ka ihe ochie, ma obu nnukwu ọdọ mmiri kwesiri ka a hu ya, ebe o mara mma nke ukwuu ma obu ebe a gha eme mgbịrịgba n'ihi na edere mgbasa ozi ebe ahụ.
Ebe ọzọ nke mmasị na Budapest bụ Rudas Baths, nke Ottoman sitere, nke e guzobere na narị afọ nke XNUMX. O doro anya na a na-ahụta ha ụlọ ịsa ahụ ndị Turkish mara mma n'ụwa, ya mere, ha dịkwa mma ileta. Ejiri spa mee spa nke anyị maara taa. E wuru ya na XNUMXth narị afọ, emesia etinyere ebe igwu mmiri na sauna na XNUMXth narị afọ ma mesịa mezigharị ya na XNUMXst narị afọ. Ekwesiri ighota na site na nmalite ya obu ebe edobere nani ndi nwoke. Kemgbe narị afọ nke iri abụọ, ụmụ nwanyị malitere ịga ma taa ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nwere ike ịga na ngwụsị izu. Ọ bụ kpọmkwem n'oge ngwụsị izu mgbe mmiri mmiri chọrọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » General » Széchenyi Spa na Budapest
Frenchzọ French nke Santiago